Ampanjifaina ny sakany Shortcode WordPress Jetpack | Martech Zone
Manandrana WordPress Jetpack Sakan'ny kaody fohy
Alakamisy, Aogositra 29, 2013 Sabotsy, Oktobra 24, 2015 Douglas Karr
Rehefa namoaka ny WordPress Jetpack plugin, nosokafan'izy ireo ny fametrahana WordPress antonony hatramin'ny fampiasa lehibe sasany izay ampidirin'izy ireo amin'ny vahaolana nampiantranoin'izy ireo. Vantany vao ampidirinao ny plugin, azonao atao ny mampiavaka ny taonina, anisan'izany ny shortcodes. Amin'ny alàlan'ny default, WordPress dia tsy mamela ny mpanoratra antonony anao hanoratra scripting haino aman-jery ao anatin'ny atin'ny lahatsoratra na pejy iray. Ity dia fiarovana fiarovana ary natao hampihenana ny vintana hanakorontanana ny tranokalanao.
Na izany aza, miaraka amina fehezan-dalàna, ny mpampiasa dia afaka mampiditra haino aman-jery mora foana. Ohatra, raha te hampiditra horonantsary Youtube dia tsy ilaina ny manampy script embed - apetrakao ao amin'ny editor amin'ny lahatsoratra fotsiny ilay URL nozaraina. Ny fampidirana ireo kaody fohy dia mamaritra ny làlana ary manolo ny URL amin'ny kaody video tena izy. Tsy misy tabataba, tsy misy olana!
Afa-tsy iray. Amin'ny fampiasana kaody fohy, ny sakan'ny haino aman-jery tafiditra dia tsy mandeha amin'ny laoniny fotsiny. Ka ny Youtube dia mety hitatra mihoatra ny sakan'ny atiny ary hiparitaka eo amin'ny sisin-tranonao - na mety handray ny antsasaky ny toerana mety ho azony i Slouriare. Nandany ora naharitra aho nanandrana namantatra ny fomba fanoratana sivana sasantsasany mba hametahana ny sakan'ny hitsin-dàlana tsirairay manokana. Nandinika plugins iray taonina aho mba hahitako raha efa nisy teo.
Ary hitako avy eo… fanovana kely mamirapiratra nampiana WordPress tao amin'ny API misy azy ireo. Famaritana ahafahanao mametaka ny sakan'ny atiny ao amin'ireo pejy sy hafatrao:
raha (! famoahana ($ content_width)) $ content_width = 600;
Raha vantany vao nametraka an'io sakany io aho tao amin'ny rakitra functions.php an'ny lohahevitra, dia nanova ny habeny araka ny tokony ho izy ny haino aman-jery hitsin-dàlana rehetra. Na dia faly aza aho fa tsy misy afa-tsy tsipika kaody ity dia somary sahirana aho fa ela loatra vao nahita an'io. Ny tena mahaliana kokoa aza dia ny tsy fisian'ny fanaingoana misy Jetpack. Shortcodes, ohatra, tsy azo disable - azo atao raha mbola alefa ny plugin.
Mety ho namirapiratra, ohatra, ny manampy farafahakeliny ny sakany sy ny haavony mivantana eo amin'ny Jetpack Fikirana kaody fohy. WordPress dia sehatra tsy mampino toy izany, fa indraindray ny mahita ny vahaolana dia mety hahasosotra kely!
Tags: hahavonyJetpackshortcodessakan'ny fampisehoanasakan'ny vimeosakanyWordPresssakany youtube
Omeo lelafo ny tranokalanao WordPress